Audacity 2.4.0 inouya nekuvandudzwa kune iyo nguva yekushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Audacity 2.4.0 inouya nekuvandudzika kune yekunze mamiriro ekushandisa uye rutsigiro rweMacOS Catalina
pablinux | | Multimedia, Free Software
Kwenguva yakareba inonyanya kufarirwa yemahara odhiyo wave yekugadzirisa app (inounganidzwa muzvinyorwa senge izvi) yaive isina kuburitsa yakawandisa magadziriso. Izvo zvachinja nguva pfupi yadarika uye nezuro May 16 llegó Audacity 2.4.0, yekuvandudza iyo, nekuda kweiyo kuverenga, inofanira kuve yakakosha, asi zvinonetsa kugadzirisa yakawanda software yaive yatove yakanaka. Zvakadaro, akawanda matsva maficha akaunzwa, kutanga nekuvandudzika kune yekunze tollbar.
Uye zvakare, ivo vakatorawo mukana kuvhurwa kunatsiridza odhiyo odhiyo. Kutanga ne Audacity 2.4.0, mupepeti ikozvino anotsigira iyo Opus (OggOpus) fomati. Kune rimwe divi, basa rekupinza uye rekutumira rakagadziridzwawo mukati. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva izvo zvauya pamwe neshanduro iyi, sezvatinoverenga mukati the Wiki kuti vakaburitsa chiitiko.
1 Audacity 2.4.0 Zvakakosha
2 Maitiro ekuisa mupepeti paLinux
Audacity 2.4.0 Zvakakosha
Ikozvino inoshanda zviri pamutemo pane macOS Catalina.
Iyo odhiyo chinzvimbo chakabviswa kubva pakusarudza maturbar uye bhaa nyowani, iyo Nguva Yekushandisa, yakagadzirwa. Iyo bhawa inoshanda chete kuti iverengerwe (verenga chete) uye inoratidza chinzvimbo chazvino cheaudio. Pakati pemabasa ayo:
Iyo yakakura uye iri nyore kuverenga iyo iripano nzvimbo yeaudio.
Isu tinogona kuigadzirisa, kuifambisa uye nekuigadzirisa munzvimbo dzakasiyana.
Unogona kushandura iyo nguva fomati yainoratidza.
Mune shanduro dzakapfuura taigona chete kushandisa Export uye Kunze mabhatani eVST uye AU mhedzisiro. Ikozvino izvi zvakawedzerwa kune ese mhedzisiro ine bhatani rekuzvibata.
Multi-View, yepamusoro ficha yevashandisi vehunyanzvi iyo inogonesa iyo spectrogram uye waveform maonero eiyoyo odhiyo kuti iratidzwe munzira imwecheteyo.
Opus yakawedzerwa seyekunze sarudzo.
Hunhu hwekutamisa nekugadzirisa saizi mazita akachinjwa. Shanduko iyi yaifanirwa kuitwa kugadzirisa zvipembenene zvakawanda.
Spectrograms ikozvino inoratidza miganhu yekucheka.
Kuvandudza mukusarudzwa kwemafungu.
Debugging kubva kudimikira keyboard: Ini ndinofambira kumberi uye U inodzokera kumashure.
Nyarara / nyora mameneti ematragi akasarudzwa.
Shanduko mukutamba / kurekodha marongero.
Mitsva Mitsva uye Ongororo:
Iyo Loudness Normalization mhedzisiro yakawedzerwa.
Analyzer kuyera RMS nhanho.
Peji rakawedzerwa kubhuku.
Yakagadziriswa anodarika zana mabugs mukuburitsa uku, kusanganisira anopfuura makumi mashanu ekutanga uye echipiri kukoshesa.
Maitiro ekuisa mupepeti paLinux
Audácity 2.4.0 iri pano inowanikwa kune ese masisitimu akatsigirwa, ayo ari Windows, macOS uye Linux. Isu tinayo inowanikwa mune dzakasiyana sarudzo, senge kodhi sosi yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link kana unofficial Ubuntu repository iyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti inogona kukundikana mushanduro dzichangoburwa, ichokwadi zvakare kuti inoshanda mushanduro dzekare. Muchiitiko chekuti iyi ndiyo sarudzo inokufarira zvakanyanya, unofanirwa kuvhura terminal uye nyora zvinotevera:
Kana iwe ukashandisa nyowani chizvarwa mapakeji, iwe zvakare unofanirwa kuziva izvo ndizvo inowanikwa seSnap (Sudo snap yekuisa audacity) uye seFlatpak, nekudzvanya Iyi link. Kana izwi rekuti “riri” rakadamburwa muchirevo chakapfuura, imhaka yekuti, panguva yekunyora, ese ari mairi Snap vhezheni senge Flatpak Ivo vachiri muv2.3.3 yesoftware yakaburitswa munaNovember 2019. Naizvozvo, sarudzo dzakavimbika kwazvo izvozvi ndedze kushandisa mabhainari kana kuva nemoyo murefu, iyo yekumirira iri yepamusoro kubva pane yangu maonero nekuti mumaawa mashoma anotevera. inofanira kusvika, kana padiki, Flathub.
Tichifunga nezve Audacity iyoyo yakanga iri nguva yakareba isina kuburitsa matsva, hazvigoneke kuziva kuti rinotevera rinoburitswa riini kana kuti chii chinoshamisira chichaunza kwatiri, asi isu tinoziva kuti ichave Audacity 2.4.1, yekugadzirisa yekugadzirisa iyo ichagadzirisa mabugs akawanikwa mune yekutanga vhezheni. dzenyaya dzino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Audacity 2.4.0 inouya nekuvandudzika kune yekunze mamiriro ekushandisa uye rutsigiro rweMacOS Catalina